समृद्धि र सुशासनका लागि मृत्युदण्ड ! | Everest Times UK
समृद्धि र सुशासनका लागि मृत्युदण्ड !
नेपालको वाम गठबन्धन सरकारले देश विकास गर्नको लागि आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मुद्दा अगाडि सारेको छ । यो मुद्दा वाम गठबन्धन सरकारको मात्र नभएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलगायत आम नेपाली जनताहरुको चाहना पनि हो । नेपाली जनता अब देशमा विकास भएको हेर्न चाहन्छन् । देश विकास गर्नको लागि आर्थिक समृद्धि जरुरी छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन महत्वपूर्ण तत्व हो । सुशासन ल्याउनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन जरुरी छ । किनभने नेपालको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको स्थितिलाई केलाएर हेर्दा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र जनतासमेतले एकले अर्कालाई नटेर्ने तथा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हुँदा देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि केही अवधिसम्म ठुल्ठूला अपराधी, भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघातीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
मेरो विचारमा मृत्युदण्डको कानुन ल्याएन भने देशमा सुशासन कायम गर्न असम्भव छ । देशमा सुशासन कायम भएन भने आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । आर्थिक समृद्धि भएन भने देश विकास गर्न असम्भव छ । यद्यपि सुशासनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याएर मात्र हुँदैन यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
यदि मृत्युदण्डको कानुनलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरिएन भने देश विकासको लागि, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक समृद्धिको लागि सुशासन भनेर कुर्लेर हिँडेको ब्यर्थै खेर जाने छ । विश्वका धेरै देशहरुमा राष्ट्रघाती, अपराधी तथा भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहरु, निजामती कर्मचारीलगायत सर्वसाधारण जनतालाई पनि मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था छ्र । जसले गर्दा सो देशका राजनीतिकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सर्वसाधारण जनता पनि अपराध, राष्ट्रघात, तथा भ्रष्टाचार गर्नबाट सजक हुने गरेका छन् । ती देशहरुको तीव्र विकास पनि यही कारण पनि भएको देखिन्छ । हाम्रो देश नेपाललाई बिकासको लागि, आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन र सुशासनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन यसै कारण पनि जरुरी भएको हो ।
विश्वको आधाजसो देशमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । तीमध्ये अधिकांश देश एसिया, अफ्रिका र उत्तर अमेरिकामा पर्दछन् । उदाहरणको लागि चीन, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, भारत, पाकिस्तान, खाडी मुलुकहरु, अफ्रिकी मुलुकहरुलगायत संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था छ । जुन देश विकासको चरमसीमामा पुगेका छन् वा विकासपथतिर तीव्र गतिमा लम्किरहेका छन् ती देशहरुमा मृत्युदण्ड रहेको छ ।
हाम्रो देश नेपालमा प्रशस्तै कानुन बने पनि सानालाई ऐन ठूलालाई चयन कायमै छ र राजनीतिक पार्टीहरु आफ्नो तथा पार्टीको लागि राष्ट्रघाती सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्छन्, आपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन्छन् । चन्दा असुली तथा कमिसन तन्त्रको चलखेल गर्छन् ।
आफ्ना पार्टीका सदस्य तथा कार्यकर्ताले अपराध र भ्रष्टाचार गरेका छन् भने पनि आफ्ना मान्छे तथा कार्यकर्तालाई सुरक्षा दिन्छन् तथा न्यायलयलाई सोझै हस्तक्षेप गर्छन् । न्यायलयले पनि राजनीतिक दबाब आयो भनेजस्तो सुकै प्रकृतिको भ्रष्टाचारी तथा अपराधी किन नहोस् भ्रष्टाचारी तथा अपराधी दण्ड सजाय दिनको साटो छुट्कारा दिने चलन हाम्रोमा छ ।
देशको न्यायलयजस्तो पवित्र ठाउँमा हाकाहाकी सोझै घूस र कमिसनतन्त्रको ठूलो चलखेल हुन्छ्र । सेना, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायमा पनि अवस्था त्यही छ । सेना तथा प्रहरी दुबै संस्थामा पदोन्नतिको लागि ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भने राशनपानी खरिद, बर्दी तथा पोसाक खरिद, हातहतियार खरिदमा कमिसनको चलखेल हुन्छ । अझ प्रहरी प्रशासनभित्र त मुद्दा मामिला मिलाई दिने निहुँमा अत्यधिक आर्थिक चलखेल तथा कमिसनको कहालीलाग्दो खेल खुल्लम्खुला रुपले हुने गरेको सार्वजानिक भएका विषयहरु हुन् ।
त्यस्तै गरेर दुवै संस्थाका ठुल्ठूला अधिकृतहरुले राज्यले राष्ट्र निर्माणको लागि दिएर राखेको तल्लो श्रेणीका जवान तथा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रुपमा भान्छे, दाउरे, चालक, चौकीदार, राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरेर निजी घर बनाउने कार्यमा लगाउने तथा बगैंचामा माली बनाएर आफ्नो स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई ठगेको नांगै आँखाले देख्न सकिन्छ । निजामती कर्मचारीको त कुरै नगरम्, नेपालको सबभन्दा अपवित्र संस्था नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । निजामती कर्मचारीलाई पापी, भ्रष्ट, घूसखोरी तथा देशको प्रधानमन्त्री तथा न्यायलयसमेतलाई नटेर्ने फोहरी संस्थाको रुपमा रहेकोले यसको सुधार गर्न अति आवश्यक छ । ठूलाको लागि टेलिफोन र आदेशको भरमा जे काम पनि बन्छ तथा छुट पाउँछन् । तर गरीब जनताको कागज पत्र सम्पूर्ण मिले पनि बिनापैसा काम बन्दैन ।
देशमा वाम गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारलाई आउने पाँच वर्षसम्म तीन बोटा चुनौतीहरु देखेको छु । पहिलो चुनौती हो, संघीय प्रदेशलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो चुनावको बेला जनतासामु प्रेषित गरेको घोषणा पत्र तथा देश विकासको नाममा बाँडिएको आश्वासन, दिएको वचनलाई कसरी पूरा गर्ने र अन्त्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई कसरी एकता गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रहेको छ । यिनै तीन कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न जति नै जटिल भए पनि करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएको हुँदा विभिन्न चुनौतीको बाबजुद पनि व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।
सर्वप्रथम यी चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जतिसक्दो चाँडो एकीकरण हुन जरुरी छ । हुन त, एकीकरण हुन त्यत्ति सजिलो छैन किनभने यी दुवै पार्टी बिगतमा एकापसमा सौताको जस्तो व्यवहार गर्थे, एउटै मञ्चमा भाषण गर्दा एकअर्काले तथानाम गाली गर्थे, मूलतः यी पार्टीहरुको सिद्धान्त नै मिल्दैन यो अवस्थामा एकीकरण हुन सजिलो नभए तापनि एकीकरणको विकल्प पनि छैन ।
यो नेपाली जनताको माग हो किनभने नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार चाहिएको छ । जनतालाई विकास चाहिएको छ । त्यसैले व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर कुनै पनि हालतमा एमाले र माओवादी केन्द्रको यथाशीघ्र एकीकरण हुन जरुरी छ र पार्टी एकीकरण भएमात्र हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था बलियो हुनेछ, पार्टी बलियो हुनेछ । संसदीय व्यवस्था तथा पार्टी बलियो भएमात्र चुनावको बेला जनतासामु प्रेषित गरेको घोषणापत्र तथा देश विकासको नाममा बाँडिएका आश्वासन पूरा गर्न सकिने छ । संघीय प्रदेशहरुलाई चाहिने कानुन, भौतिक संरचनालगायत अन्य समस्याहरुको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
अन्त्यमा, नेपोलीयन बोनापार्टले भनेका थिए, “आमा मलाई एउटा असल सन्तान देऊ अनि तिमीलाई म असल राष्ट्र दिनेछु ।’’ नेपाल आमाले नेपालमा धेरै असल सन्तानहरुको जन्म दिएकी छन् ती असल सन्तानहरुले नेपाललाई एउटा असल राष्ट्र बनाउने छन् । नत्र भने भूपी शेरचनद्वारा लिखित कविता, “हुँदैन बिहानी एक दुई तारा झरेर नगए, बन्दैन देश एक दुई सपुत मरेर नगए’’ सम्झनु पर्ने हुन्छ ।
हुन त, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा देश विकास गर्नको निम्ति तथा शासनसत्ता परिवर्तन गर्नको निम्ति उन्नाइस हजार सपूतहरुले आफूलाई बलि चढाए । नेपालीले हाम्रो देश नेपालले काँचुली फेरेको हेर्न चाहन्छन्, देश विकास भएको अनुभूति गर्न चाहन्छन् । देश समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् ।
त्यसैले भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती राजनीतिकर्मी, सुरक्षा निकायका र निजामती कर्मचारीका उच्च पदस्थहरु सर्वसाधारण जनतालाई समेत मृत्युदण्ड नदिएसम्म देश विकास हुने छैन तथा समृद्धि हुने छैन । सम्पूर्ण नेपाली दाजुुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु समयमै सचेत हुन अनुरोधका साथै हाम्रो प्यारो देश नेपाल समृद्ध होस् । शुभकामना